Ochwepheshe bafuna ukwehlisa amahemuhemu athi umuthi wokugoma i-Pfizer awusebenzi | Scrolla Izindaba
Ochwepheshe bafuna ukwehlisa amahemuhemu athi umuthi wokugoma i-Pfizer awusebenzi
INingizimu Afrika izoqhubeka nohlelo lwayo lokuqalisa ukukhipha imithamo yayo eyizigidi ezingama-20 yomuthi wokugoma i-Pfizer, yize ucwaningo lwakamuva lukhombisa ukuthi izinga lokusebenza kwawo liphansi uma liqhathaniswa nokwehlukahlukana okuvelele kwezwe.
Ucwaningo lwakamuva, olushicilelwe ku-New England Journal of Medicine, luphakamise ukuthi lokhu kuhlukahlukana kunganciphisa inani lama-antibodies amahle – alwa naleli gciwane – atholwe umuthi wokugoma cishe izingxenye ezimbili kwezintathu.
Lezi zindaba zifika ngemuva kwesimemezelo sikaNgqongqoshe Wezempilo uZweli Mkhize sokuthi izwe lalisezingxoxweni namazwe angama-20 ase-Afrika ukuthi athenge imithamo eyizigidi eziyi-1.5 yomuthi wokugoma i-AstraZeneca owathengwa yiNingizimu Afrika ngoMasingana.
Isinqumo sikahulumeni sokungawukhiphi umuthi wokugoma i-AstraZeneca size ngemuva kocwaningo oluncane oluthole ukuthi lo mgomo unezinga elisebenza ngo-22% lokulwa nokuvimbela ukutheleleka okuncane nokulingene okuvela kolokhu kuhluhlukana kwaseNingizimu Afrika.
Kodwa-ke, uMkhize utshele i-Sunday Times ukuthi “ukhululekile” ukukhishwa kwe-Pfizer kumele kuqhubeke njengoba bekuhleliwe.
INingizimu Afrika izibophezele ekuthatheni okungaphezulu kwezigidi ezingama-20 komuthi wokugoma i-Pfizer, ngamaqoqo okuqala okumele afike emasontweni ambalwa ezayo kanti iningi lizoba ngoNhlaba.
Ochwepheshe abahamba phambili ezweni baphinde baxwayisa ngokuthi bangasusi ukusebenza kwe-Pfizer ngenxa yolwazi abanalo ngomuthi wokugoma i-AstraZeneca.
UProfesa uBarry Schoub, oyinhloko yekomidi lezeleluleko lomuthi wokugoma (i-MAC), uzichithile izinsolo zokuthi i-Pfizer ayisebenzi.
“Ukwehliswa kokusebenza kwayo akubalulekanga kangako. Yize singakwazi ukusebenza kwayo ngokuphelele okwamanje, iNingizimu Afrika kumele ngabe iyawuthola lo muthi wokugoma.”
Umthombo wesithombe: @WebMD